Kwandiswe izindlela zokusiza abathengi abanezinkinga KwaZulu-Natali. USLINDILE KHANYILE noSIMANGALISO NTSHANGASE bayabika - Umbele I SMME Profiles I Labour I Economics I Agriculture I Executive Interviews I Personal Finance News
USolwazi uBonke Dumisa, uSihlalo weNkantolo yabaThengi entsha KwaZulu-Natali
Kwandiswe izindlela zokusiza abathengi abanezinkinga KwaZulu-Natali. USLINDILE KHANYILE noSIMANGALISO NTSHANGASE bayabika
ABATHENGI baKwaZulu-Natali sebezosizakala ngokuthe xaxa njengoba sekuneNkantolo yabaThengi esebenza njengeNkantolo ePhezulu; into ebikade ingekho. Le nkantolo entsha izoholwa wuSolwazi uBonke Dumisa.
Isimemezelo saleNkantolo yabaThengi senziwe ngesonto elidlule ngosuku lokugubha usuku lwabathengi, i-World Consumer Day. Phambilini eKZN bekukhona iHhovisi loMvikeli wabaThengi kuphela.
“Umehluko phakathi kweHhovisi loMvikeli wabaThengi neNkantolo yabaThengi wukuthi iHhovisi loMvikeli wabaThengi liwumxazululi wemibango ephakathi kwabathengi nabadayisi kodwa alinawo amandla okuphoqa ukuthi izinqumo elizikhiphayo zilandelwe. Kodwa iNkantolo yabaThengi ithetha amacala futhi inamandla eNkantolo ePhakeme. Loku okwenzeka eKZN kade kwaba khona kwezinye izifundazwe kanti ithimba engisebenzisana nalo ngelabameli abanamava impela,” kusho uDumisa.
Nokho-ke umthengi akavele aye enkantolo. Kufanele aqale kumvikeli bese kuthi uma kuhluleka lapho icala lidluliselwa enkantolo. Inkantolo izosebenzisana ngqo nehhovisi lokushushisa kanti otholwa enecala angagcina esedlelwa nempahla.
“Awumdingi ummeli (ukuze usizakale). Angisho kabi kodwa abameli abaningi abaliboni elidlalayo uma kuziwa emthethweni wezamabhizinisi, basuke bepatanisa nje bezozama intuba abangaphunyuka ngayo. Indlela thina esisebenza ngayo akuyona lena eyimpi yasenkantolo ejwayelekile, siyazama ukubhalansisa izinto,” kuchaza yena.
Uthi kwenye inkathi ngabathengi abathatha amashansi kanti esimweni esinjalo bayaqikelela ukuthi bayabavuna abadayisi. Uthi bayakwazi ukuhlela ukuthi kube notolika kodwa yisicelo okufanele umuntu asheshe asifake.
Kulo nyaka bekuphela iminyaka ewu-39 kwaqala ukugujwa i-World Consumer Day. Lwaqala ukugujwa mhla ka-15 Mashi ngo-1983, lisungulwa ngowayenguMengameli waseMelika uMnu uJohn Kennedy, owaqala ukubikezela ngokubaluleka kwalo kwi-US Congress mhla ka-15 Mashi ngo-1962.
Ezinye zezinhlaka nezinhlangano ezibhekelele ukuqinisekisa ukuthi ilungelo lomthengi liyahloniswa futhi zonke izidingo zakhe zibhekwe ngendlela efanele yiNational Consumer Commission (iNCC), yi-Independent Communications Authority of South Africa (i-ICASA), iConsumer Goods and Services Ombud (iCGSO) neSA Consumer Complaints.
I-National Consumer Commission ngolunye lwezinhlaka ezivikela amalungelo omthengi
I-NCC yinhlangano eyasungulwa wuhulumeni waseNingizimu Afrika kanti isebenza ngaphansi komNyango woHwebo neziMboni ukuqinisekisa ukuthi abathengi baphatheka kahle ngaso sonke isikhathi. Isebenza ngaphansi komthetho iConsumer Protection Act 68 yango-2008.
I-ICASA ibheka Izikhalo zabathengi eziqondene nabangagculisekile ngako embonini yezokusakaza nokuxhumana.
Abafuna ukufaka izikhalo bangazithumela kwi-email ethi: consumer@icasa.org.za. Ezimweni lapho umthengi engagculisekile khona ngasuke ekhononde ngako kwi-ICASA, yona inamandla okwedlulisela udaba lwakhe ekomidini le-Alternative Dispute Resolution ukuze agcine egculisekile.
I-ICASA ilalela izikhalo ngezokusakaza nezokuxhumana
I-CGSO yona ingenelela ezimweni lapho umthengi esuke engagculisekile ngomkhiqizo awuthengile noma engavumelani nenkampani asuke ekhononda ngomkhiqizo ongamgculisi awuthenge kuyona. Kwabafuna ukuxhumana nayo bangayibhalela ku-info@cgso.org.za.
I-SA Consumer Complaints, esePitoli, eGauteng, esebenza ngokuzimele yona isiza abathengi abasuke benenkinga yokungakwazi ukukhokhela inkontileka noma isikweletu; kungaba esemoto, indlu, ugesi, izakhiwo nokunye okunjalo. Isineminyaka eyisikhombisa isebenza kanti ngokolwazi olukwi-website yalo, isibhekane nezikhalo zabathengi ezingaphezu kuka-8 000, yaxazulula u-80% wazo. Kwabafuna usizo lwayo bangayibhalela ku: admin@saconsumercomplaints.co.za. Abafuna ukufaka izikhalo eNkantolo yabaThengi bangathumela ku: Consumer.Complaints@kznedtea.gov.za noma bashayele inombolo yamahhala ethi: 0800 333 667 noma bashayele u-031 310 5300/031 310 5511.